ကားလေကာမှန်များအတွက် တရုတ် Bent မှန်အဝတ်လျှော်စက်များ ထုတ်လုပ်သူများ | Fuzuan
မှန်လိုအပ်သည်- ကားအတွက် လေကာမှန်များ (တစ်ချပ်တည်း)
ဖန်သားအထူ- ၁.၆ မီလီမီတာ – ၅ မီလီမီတာ
Glass Transfer Speed ​​: 3-10 m/min
ကွေးကောက်မှု- အများဆုံး။ 40mm
အဝတ်လျှော်မုဒ်- ဖိအားမြင့်ဆေးဖြန်းဘားများဖြင့်သာ လျှော်ပါ။(ကျွန်ုပ်တို့တွင် အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပါသည်၊ နောက်တစ်မျိုးမှာ စုတ်တံနှင့် ဖိအားမြင့်ဆေးဖြန်းဘားများပါရှိပါသည်။)
ထိန်းချုပ်မှုစနစ်- Allen Bradley PLC/HIM
အသုံးပြုပုံ- ကွေးထားသော ကားလေကာမှန်ကို ဆေးကြောပြီး အခြောက်ခံပါ။
Laminated လေကာမှန်မှန်များထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ကွေးထားသောမျက်မှန်များသည် သတ္တုစင်များပေါ်တွင် ကွေးနေသောမီးဖိုများမှ ဆင်းသက်လာသည်။ မျက်မှန်များကို အတွဲများ (အတွင်းမျက်မှန်နှင့် အပြင်မျက်မှန်တွဲများ) ခွဲထားသည်။
သတ္တုစင်များပေါ်ရှိ ဖန်အတွဲများကို သယ်ယူကိရိယာပေါ်တွင် တင်ဆောင်မည့် ဖန်ပြုပြင်ရေးလိုင်း၏ သယ်ဆောင်သည့်အနေအထားသို့ ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် မျက်မှန်များကို conveyor ပေါ်တွင် တွဲဖြုတ်ပြီး ကွေးထားသော အဝတ်လျှော်စက်သို့ ရွှေ့ပါမည်- တစ်ရွက်ချင်း (အတွင်းပိုင်း ပထမနှင့် အပြင်အောက်)။ မျက်မှန်အားလုံးသည် အောက်ဘက်အတောင်ပံများဖြင့် ဦးတည်ထားပါသည် (အနိမ့်သို့ ငုံ့ကာ၊ ပိုက်လိုင်း၏ခါးပတ်ပေါ်တွင်4ခုကို မျက်နှာမူထားသည်)။ အဝတ်လျှော်စက်ပြီးနောက်၊ မျက်မှန်ခြောက်များသည် ပိုက်လိုင်းပေါ်မှ အအေးခံဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသို့ ရွှေ့ပါ (PVB စာရွက်များနှင့် တပ်ဆင်ရန်အတွက် အပူချိန်လိုအပ်သည့်တိုင်အောင် ၎င်းတို့ကို အအေးခံမည့်နေရာ)။
ကွေးနေသောမှန်များအတွက် ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို မော်တော်ကားအကာအရံများဖြစ်သော မှန်များဖြစ်သည့် ကွေးညွှတ်သောလေကာမှန်များနှင့် ကားအပေါ်ပိုင်းမျက်မှန်များအတွက် အသုံးပြုသည်။
FZBGW-2000 အတွက် အမြန်နှုန်း: 3-10 m/min (စိတ်ကြိုက်)
ဤ Bent Glass Washing Machine သည် အဓိကအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အလုံပိတ်အခန်းကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလုံး ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသင့်သောကြောင့် သန့်ရှင်းသောရေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သည် (အညစ်အကြေးများကို ရှောင်ရှားပါ)၊
စက်ဘောင်ကိုယ်နှိုက်နှင့် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ထားသော ရေနှင့်ထိတွေ့သော အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည် သံမဏိ (No.304) ဖြစ်သည်
အလုံပိတ်အခန်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် ဝင်ပေါက်တံခါးများ၊ တံခါးသော့တပ်ဆင်မှုတွင် တပ်ဆင်ထားသော သော့ခတ်ထားပြီး ပြုပြင်ရန်အတွက် အလုံပိတ်အခန်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် လွယ်ကူသော ပြတင်းပေါက်များကို တပ်ဆင်ကာ တံခါးသော့ခတ်ထားချိန်တွင် မှန်ဆေးခြင်း၏ အခြေအနေကို သတိပြုပါ။
အလုံပိတ်အခန်း၏ ဒီဇိုင်းသည် နေရာအလုံအလောက်ရှိပြီး အတွင်းပိုင်းကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လွယ်ကူသည်။
တံခါးများအားလုံးတွင် လုံခြုံရေးခလုတ်ကို တပ်ဆင်ထားပြီး ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပါက တံခါးအား ပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပန့်၊ အစာစားစနစ်နှင့် ပန်ကာကို ပိတ်ကာ ဘေးကင်းရေး အကာအကွယ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အလုံပိတ်အခန်း၏ အပေါ်ဘက်တွင် မီးလုံး ၂ လုံး တပ်ဆင်ထားပြီး အတွင်းပိုင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပြုလုပ်ရန်အတွက် မျက်ဆန်ခတ်ခြင်းရှိစေရန် ဝင်ပေါက်တံခါး၏ မှန်ပြတင်းပေါက်မှ မှန်ဖြင့် သေချာစွာ တပ်ဆင်ပါ။
အလုံပိတ်အခန်း၏အောက်ခြေတွင် ရေကန်အဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ flume ဆေးကြောခြင်း၏ ပထမနည်းလမ်း၊ ဒုတိယနည်းဖြစ်သော ဖိအားမြင့် flume ကို ဆေးကြောခြင်းနည်းလမ်းကို ပိုင်းခြားထားသည်။
မြင့်တက်လာသော flumes တစ်ခုစီတွင် တံခါးများ၏ဧရိယာရှိ အောက်ခြေဘုတ်တစ်ခုဖြင့် ခိုင်ခံ့စွာတပ်ဆင်ပြီး ဖုံးအုပ်ထားသည့် ထွက်ပေါက်အဆို့ရှင်ပါရှိသည်။
ပိုက်သုံးချောင်းရှိ ရေသည် အနောက်မှ အနောက်သို့ စီးဆင်းနိုင်ပြီး၊ သန့်စင်သောရေဆေးဂိုဏ်းမှ လျှံနေသောရေသည် အလယ်ညှပ်ဘုတ်မှတစ်ဆင့် မြင့်မားသောဖိအားသို့ စီးဆင်းသွားနိုင်သည်၊ high pressure rinsing sect မှာ flume water က လျှံကျလာတဲ့အခါ pre-rinsing sect မှာ flume ထဲကို စီးဆင်းနိုင်ပါတယ်။ ကြိုတင်ဆေးကြောထားသော flume ၏ရေသည် လျှံထွက်သောအခါ၊ overflow hole မှတဆင့် ရေတိုင်ကီအပြင်သို့ စီးဆင်းနိုင်သည်။
ကန်အတွင်းရှိရေသည် နောက်သို့ပြန်မစီးဆင်းနိုင်တော့ဘဲ သန့်ရှင်းသောရေသည် မြင့်မားသောဖိအားသို့ စီးဆင်းသွားပြီးနောက် ကြိုတင်ဆေးကြောခြင်းသို့ စီးဆင်းစေကာ ရေ၏သန့်ရှင်းမှုကိုသေချာစေပါသည်။
ရေကန်တွင် ဇကာနှင့် ဖန်ခွက်များကို စုဆောင်းရန်အတွက် အိတ်ဆောင် filter ပိုက်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လွယ်ကူသည်။
အဝတ်လျှော်ဂိုဏ်း၏ ဖန်အ၀င်ဝတွင် ရေများကျဲကျဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ပလပ်စတစ် အရိပ်များ တပ်ဆင်ထားသည်။
အဝတ်လျှော်ဂိုဏ်းနှင့် အခြောက်ခံဂိုဏ်းကြားတွင် ရေစိမ်ခံသည့်ဗန်းပါရှိကာ ရေစိုခံအချိတ်အဆက်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။
Curved glass transmission သည် adjustable belt conveying ကို လက်ခံသည်။
feeding framework ၏ configuration သည် bearing အပါအဝင် stainless steel များအားလုံးသည် stainless steel အစိတ်အပိုင်းများကို လက်ခံ၍မရပါ၊၊ ရော်ဘာ သို့မဟုတ် နိုင်လွန်ကဲ့သို့ demineralized water နှင့် သံချေးမတက်အောင် ကာကွယ်နိုင်သော အခြားပစ္စည်းများကို လက်ခံသင့်ပါသည်။
ရေနှင့်မထိဘဲ အခြောက်ခံဂိုဏ်း၏ ထွက်ပေါက်နှင့် ဝင်ပေါက်တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမော်တာနှစ်လုံးကို အသီးသီးတပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည် အမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိရန် Inverter ကို အသုံးပြု၍ ခြေလှမ်းကင်းစင်သော အပြောင်းအလဲကို ရရှိနိုင်သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘောင်တစ်ခုလုံးကို အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲကာ ခေါက်ချိုးလိုက်ကာ အစာကျွေးခြင်း (Overlapping type conveyor)၊ ၎င်းကို ခါးပတ်3ခုဖြင့် လက်ခံသည်။
အဝတ်လျှော်စက်၏ ဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက်တွင် အာရုံခံကိရိယာ တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းသည် မှန်၏ အဝင်နှင့် အထွက်တို့ကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။
● ကြိုတင်ဆေးကြောခြင်း (ရေနွေး)
ကြိုတင်ဆေးကြောခြင်းသည် ပလုတ်ကျင်းရန် ပက်ဖြန်းခေါင်းကို အသုံးပြုသည်၊ ဖြန်းခေါင်းများသည် ရေပိုက်ငယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ၊ ထို့နောက် ပိုက်များသည် ပင်မရေပိုက်ကို ပိုက်ထိပ်မှ တဆင့် ပိုက်များပေါ်တွင် အညီအမျှ ဖြန့်ဝေပေးသည်၊ ရေပိုက်ငယ်၏ အရှည်ကို ဖန်ပုံသဏ္ဍာန်အရ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အပြည့်အဝ ဆေးကြောရန် သေချာစေပါသည်။ .
ရေမဆေးချမီ ရေပိုက်အတက်အဆင်း၊ ရေပိုက်ငယ်များ တိုတောင်းခြင်း၊ ရေဖြန်း Nozzles + ရေစုပ်စက် + ဖိအားမီတာဖြင့် စစ်ထုတ်ခြင်း + Flow alarm ပါသည့် Flow Meter စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
● ဖိအားမြင့်ဆေးကြောခြင်း (ရေပူ)
ဖိအားမြင့်ဆေးကြောခြင်းတွင် မှုတ်ဆေးခေါင်းမှ ပက်ဖြန်းပေးခြင်း၊ ပက်ဖြန်းခေါင်းများကို ရေပိုက်ငယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် ပိုက်များသည် ပင်မရေပိုက်ကို ပိုက်ထိပ်မှ တဆင့် ပိုက်များပေါ်တွင် အညီအမျှ ဖြန့်ဝေပေးသည်၊ ရေပိုက်ငယ်၏ အရှည်သည် ဖန်ပုံသဏ္ဍာန်အရ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အပြည့်အဝ ဆေးကြောရန် သေချာစေပါသည်။ .
● DI ရေဆေးခြင်း (ပိုက်လိုင်းအပူပေးစက်ဖြင့်)
သန့်ရှင်းသောရေဖြင့် ဆေးကြောခြင်းတွင် ပလုတ်ကျင်းရန် ပက်ဖြန်းခေါင်းကို အသုံးပြုသည်၊ ရေပိုက်ငယ်နှင့် ပက်ဖြန်းခေါင်းကို ချိတ်ဆက်ပေးသည်၊ ရေပိုက်ငယ်များသည် ပင်မရေပိုက်ပေါ်ရှိ ပိုက်ထိပ်မှ ပိုက်မှတဆင့် ညီတူညီမျှ ဖြန့်ဝေပေးသည်၊ ရေပိုက်ငယ်၏ အရှည်သည် ဖန်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ဆေးကြောရန် သေချာသည်။ အပြည့်အဝ။
သန့်စင်သောရေကို ဆေးကြောခြင်း ရေလမ်းတွင် ပင်မရေပိုက်အတက်အဆင်း + တိုတောင်းသော ရေပိုက်ငယ် + မှုတ်စက်များ + ရေစုပ်စက် + ဖိအားမီတာပါသော ဇကာ + စီးဆင်းမှု မီတာများ ပါဝင်သည်။
လေဖိအားကို ကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်စေရန် အလုံပိတ်အခန်းတစ်ခုလုံးကို ဒီဇိုင်းထုတ်သင့်သည်။
စက်ဘောင်ကိုယ်တိုင်နှင့် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ထိတွေ့နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည် SS304 ဖြစ်သည်။
အလုံပိတ်အခန်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် ဝင်ပေါက်တံခါးများ တပ်ဆင်ထားပြီး တံခါးတွင် လော့ခ်ချခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အလုံပိတ်အခန်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် လွယ်ကူသော ပြတင်းပေါက်များကို သော့ခတ်ထားပြီး တံခါးတွင် ဖန်ခြောက်ခြင်းအခြေအနေကို သတိပြုပါ။
အလုံပိတ်အခန်း၏ ဒီဇိုင်းသည် နေရာအလုံအလောက်ရှိသင့်သည်၊ ၎င်းသည် လူများအတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အတွင်းဘက်မှန်များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် အဆင်ပြေသည်။
တံခါးများအားလုံးတွင် လုံခြုံရေးခလုတ်ကို တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် တံခါးဖွင့်သည့်အခါ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ချက်ချင်းပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဘေးကင်းစေရန်အတွက် ရေစုပ်စက်၊ အစာစားစနစ်နှင့် ပန်ကာကို ပိတ်ပါ။
အလုံပိတ်အခန်း၏ အပေါ်ဘက်တွင် တံခါး၏ မှန်ပြတင်းပေါက်မှ မျက်လုံးများ ပေါက်ထွက်နေစေရန်အတွက်၊ အတွင်းပိုင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် Floodlight2ခု တပ်ဆင်ထားပါသည်။
● ချိန်ညှိနိုင်သော လေဓား (လက်စွဲနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ)
လေဓား ၄ ချောင်း တပ်ဆင်ထားသည်။(စိတ်ကြိုက်)
လေဓားတစ်ခုစီသည် အမြင့်ကို ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
ဖန်သားကို အပြည့်အဝခြောက်သွေ့ကြောင်း သေချာစေရန် လေဓားနှစ်ဖက်စလုံးသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ထောင့်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
လေဓားနှစ်ဖက်စလုံး၏ ထောင့်ချိန်ညှိမှုကို မော်တာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။
● ပန်ကာ Blower Box
ပန်ကာဘောက်စ်ကို အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားသည်- စစ်ထုတ်ခန်းနှင့် ပန်ကာခန်း
Filtrate Chamber သည် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ရန်အတွက် တံခါးတစ်ပေါက်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းသည် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ရန်အတွက် filtrate chamber အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
filtrate chamber တွင် pre-filtrate net၊ pocket-typed filtrate net ပါ၀င်သော လေကွာဟချက် ပါဝင်သည်။
ပန်ကာအခန်းကို ပန်ကာတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် အဓိကအသုံးပြုကြပြီး စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းအတွက် တံခါးကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းအတွက် ပန်ကာခန်းထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
ပန်ကာသေတ္တာတစ်ခုလုံးတွင် ဆူညံသံကိုကာကွယ်ရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တောင်းဆိုမှုကို ကျေနပ်စေရန်အတွက် အသံ insulation ချည်ကို တပ်ဆင်ထားသည်။
ပန်ကာ၏ ထွက်ပေါက်လေသည် လေတံခါးဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ စတင်ပန်ကာသည် ပန်ကာမော်တာအား ကာကွယ်ပေးသည်။
အခြောက်ခံဂိုဏ်းတွင် လှေကားငယ်နှင့် အမိုးပြားများပါရှိပြီး လူများဝင်ရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် လွယ်ကူသည်။
Glass Thickness 1.6 မီလီမီတာ –5မီလီမီတာ
ကွေးကောက်ခြင်း။ အများဆုံး 40 မီလီမီတာ
Glass Transfer Speed3- 10 m/min (စိတ်ကြိုက်)
မက်။ အခြောက်ခံနှုန်း 10 m/min
လေဓား4အတွဲ
အတိုင်းအတာ 10470*4270*2850mm (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်)
စုစုပေါင်းအလေးချိန် 25,000 ကီလိုဂရမ်
စုစုပေါင်းပါဝါ 280 KW
ဖိထားတယ်။6bars dehumidified / ဆီကင်း
Demineralized Water <5us/sq.cm
ဖိအား 3-4 ဘား
ဖန်ခွက်တောင်းဆိုမှု ခါးကို ကြိတ်ပြီးမှ ဖန်ခွက်၊
● ဝင်ပေါက်တံခါးပါရှိသော သံမဏိအလုံပိတ်အခန်း
● ရေစိုခံ၊ ဂဟေဆော်ခြင်းဖြင့် ဖရိန်အဆစ်ကို တံဆိပ်ခတ်ရန် အပြည့်အ၀ ဂဟေလုပ်ငန်းစဉ်ကို ချမှတ်ပါ။
● မြင့်မားသောသန့်ရှင်းမှု၊ ဖိအားမြင့်လေဖြန်းဖြင့် အော်တိုမှန်ကို ဆေးကြောခြင်း၊
● ရေစည်ကို လည်ပတ်နေသော ရေစုပ်စက်နှင့် အပူပေးစက်မှတစ်ဆင့် အနည်းဆုံး ဖိအားမြင့်မှုတ်ပိုက် နှစ်စုံနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
● လေအခြောက်ခံသည့်အပိုင်းတွင် လေအခြောက်ခံသည့်အပိုင်းရှိ ထုတ်လွှင့်မှုကိရိယာအပေါ်နှင့်အောက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာလေဓားအုပ်စုများ ပါဝင်ပြီး လေဓားအုပ်စုအတွင်းရှိ လေဓားတစ်ခုစီကို လှည့်ပတ်ထားသော lifting device ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားသည်။
● ရုတ်သိမ်းသည့်ကိရိယာသည် လေဓား၏လှည့်ခြင်းနှင့် ရုတ်သိမ်းခြင်းတို့ကို သိရှိနိုင်ပြီး လေအခြောက်ခံဖန်ခွက်အတွက် သင့်လျော်သောပုံစံသို့ လေဓားကို ချိန်ညှိရန် အဆင်ပြေသောကြောင့်၊ တည်ငြိမ်သောလေဖိအားကိုရရှိစေပြီး ကောင်းသောလေအခြောက်ခံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေသည်။
● ဖန်သားပြင်၏အောက်ခြေတွင် ထောင့်သေထောင့်များမရှိစေရန် သေချာစေရန်အတွက် ဂီယာကြိုးများ နှင့် ဂီယာကြိုးများ ပေါင်းစပ်ထားပြီး ဘက်စုံသုံးနည်းဖြင့် လေကို အခြောက်ခံနိုင်ပါသည်။
● ဖန်၏အဝင်နှင့်အထွက်ကိုသိရှိရန် အဝတ်လျှော်စက်၏ဝင်ပေါက်နှင့်အထွက်တွင် အာရုံခံကိရိယာများကို တပ်ဆင်ထားသည်။ ဖန်ခွက်သည် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အဝင် သို့မဟုတ် ထွက်မလာသောအခါ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသက်သာစေရန် ပန့်သည် ရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ယခင်- ထရပ်ကားဘတ်စ်ကားလေကာမှန်အတွက် မှန်အဝတ်လျှော်စက်များကို ကွေးပါ။
နောက်တစ်ခု: မှန်ကွေးအဝတ်လျှော်စက် ပြတင်းပေါက်မှန်ဘေးဘေးရပ်ကွက်